Turkey lifts most pandemic restrictions as new cases plateau - MediExpose
Home/Diseases, Conditions, Syndromes/Turkey lifts most pandemic restrictions as new cases plateau
People walk on Istiklal Street, the main shopping street in Istanbul, Thursday, July 1, 2021. Turkey’s government on Thursday eased restrictions in place to curb the spread of the coronavirus, and have reopened theaters, cinemas and other entertainment centers. Credit: AP Photo/Emrah Gurel
People play cards in a coffee shop in Istanbul, Thave fun in a restaurant in Istanbul, Thursday, July 1, 2021. Turkey’s government on Thursday eased restrictions in place to curb the spread of the coronavirus, and have reopened theaters, cinemas and other entertainment centers. Credit: AP Photo/Emrah Gurel
People have fun in a restaurant in Istanbul, Thursday, July 1, 2021. Turkey’s government on Thursday eased restrictions in place to curb the spread of the coronavirus, and have reopened theaters, cinemas and other entertainment centers. Credit: AP Photo/Emrah Gurel
Cleaning staff prepare a movie theater for reopening after several months shut as part of the measures to curb the spread of the coronavirus, in Istanbul, Thursday, July 1, 2021. Turkey’s government on Thursday eased restrictions in place to curb the spread of the coronavirus, and have reopened theaters, cinemas and other entertainment centers. Credit: AP Photo/Emrah Gurel
People sit in a restaurant in Istanbul, Thursday, July 1, 2021. Turkey’s government on Thursday eased restrictions in place to curb the spread of the coronavirus, and have reopened theaters, cinemas and other entertainment centers. Credit: AP Photo/Emrah Gurel
Mannequins that were used to be placed on tables to ensure social distancing to help curb the spread the coronavirus, are pictured in a restaurant in Istanbul, Thursday, July 1, 2021. Turkey’s government on Thursday eased restrictions in place to curb the spread of the coronavirus, and have reopened theaters, cinemas and other entertainment centers. Credit: AP Photo/Emrah Gurel
A woman takes pictures in Istanbul, Thursday, July 1, 2021. Turkey’s government on Thursday eased restrictions in place to curb the spread of the coronavirus, and have reopened theaters, cinemas and other entertainment centers. Credit: AP Photo/Emrah Gurel
A woman takes photos, in Istanbul, Thursday, July 1, 2021. Turkey’s government on Thursday eased restrictions in place to curb the spread of the coronavirus, and have reopened theaters, cinemas and other entertainment centers. Credit: AP Photo/Emrah Gurel
Turkey lifts most pandemic restrictions as new cases plateau (2021, July 1)